Ny Semalt Expert Mahalala Ny Fampiasana Google Analytics Amin'ny Hehy
Zava-dehibe ny mitaona ny fanaraha-maso araka ny fomba fanao amin'ny Google Analytics. Mifindra, Ivan Konovalov, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia hilaza aminao ny fomba hisorohana ny tabataba miaraka amin'ireo filôzôfôma fototra.
Google Analytics dia iray amin'ireo sehatra matanjaka indrindra amin'ny fahazoana fahalalana sy tombontsoa sarobidy momba ny tranonkalanao. Ireo rehetra ireo dia mety hisy fiantraikany mivantana na tsia amin'ny orinasanao. Alohan'ny handavaka ny sasantsasany, tokony handray fanapahan-kevitra sasantsasany ianao ary hisafidy ireo loharano azo antoka hanesorana ny tabataba.
Azo antoka ny filazana fa ny fanivanana ny feo avy amin'ny Google Analytics dia manan-danja. Tokony hampiova matetika ny angon-drakitrao ianao ary hahita fomba sasany hanivanana ny tabataba. Plus, tokony ho fantatrao ny karazana fifamoivoizan'ny tranonkala sy ny fomba hihazonana ny kalitaony. Ny fanaovana tranonkala maromaro dia mora, fa sarotra kokoa ny miatrika ny fomba fijery maro, ka manome antoka fa ny tranonkalanao dia mahazo fitsapana tsara. Mety ho sarotra aminao koa ny miatrika rafitra kaonty ary mitaky ny fanampian'ny olona amin'ity lafiny ity. Ny zava-dehibe sasany anefa dia zava-dehibe ho antsika rehetra.
Fampahafantarana filtre Google Analytics
Ny filaharan'ny Google Analytics, tahaka ny mazava amin'ny anarany, dia manome fomba iray hanovana sy hamerana ny angon-drakitra. Amin'ny ankapobeny dia azo jerena ao amin'ny fizarana pejy izany. Ny Google Analytics dia manana endriny manokana hamela ireo mpampiasa azy hamorona marika marobe izay mifanaraka aminy..Ny sivana tsirairay dia manana ny endri-javatra, ary mampiasa filters. Azonao atao ny manilika na mametraka ny angona manokana. Ankoatra izany, afaka manamboatra filaharam-batana azo ampiasaina ianao amin'ny alàlan'ny baiko notononina tao amin'ny sokajy Assign Filter.
Esory ny tabataba miaraka amin'ny filamatra fototra
Zava-dehibe ny hampihatra ny sivana amin'ny fomba fijerinao raha misy fiantraikany amin'ny angon-drakitra sy vahaolana. Azonao atao ny mamerina mametraka indray ny rakitra voasivana ary mametraka ny vaovao any amin'ny solosainao.
Nefa alohan'ny hanaovana izany, dia tadidio ireto zavatra manaraka ireto:
1. Raha tsy misy sivana IP
Tsy maintsy manafoana ny fijery avy amin'ny fikambanana ianao mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny fifamoivoizanao. Saika ny orinasam-pambolena rehetra no manao izany ary manova ny angon-dry zareo dieny izao. Ny fitsidihana avy any amin'ny biraonao dia tsy mitovy amin'ny fitsidihan'ny loharano ivelany. Azonao atao ny manilika ny adiresy anatiny ao amin'ny sehatra fijery ao amin'ny Google Analytics. Azo atao koa ny mampihatra sivana samihafa amin'ny tambajotra misy adiresy IP roa. Raha toa ka tsy dia lehibe loatra ny tranonkalanao ary mampiasa ny Google Manager ianao, dia tsy maintsy mandefa ny fijerena ny tranonkalanao izay novana tao amin'ny Google Manager miaraka amin'ny fitsipika sy macros manokana .
2. Bilaogera ambany fonenana sy fanondroana fanentanana
Tsy maintsy manery filtre kely ianao amin'ny fampielezan-kevitra sy ny toetra maha-izy azy ireo amin'ny vokatra tsara. Rehefa mampiasa mari-pamantarana marika amin'ny famoronana URL virtoaly ho an'ny fanentanana tranokala ianao, dia tokony hanonona ny singa tsirairay mifototra amin'ny karazana mpanatrika sy ny sivana izay noforonina ho azy. Ohatra, afaka manonona sivana ianao tahaka ny LinkedIn ary manomboka mahazo fifamoivoizana mivantana avy amin'io tranonkala media sosialy io.
Ireto misy hevitra sivana goavana ho an'ny fanesorana ny feo. Antenaina fa hahazo fanazavana ampy avy amin'ireo hevitra ireo ianao ary afaka mitazona ny kalitao sy ny fitokisany ny tranokalanao Source .